Ngaba Uyabakhuthaza okanye Uyabatyhafisa Abafundi Bakho? | Martech Zone
NgoLwesibini, Matshi 20, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngokuhlwanje ndifumene i-imeyile evela kwiMida. Kukho ukhuphiswano kuQokelela ukuze ubhale malunga notitshala obutshintshileyo ubomi bakho.
Iposti yebhlog yamva nje evela kuBrian Clark weCopyBlogger yayiyimpembelelo yam Iimpazamo ezi-5 zeGrama ezikwenza ujongeke usisimumu. UBrian ubhale iposti ngaphezulu kweeveki ezi-2 ezidlulileyo, kodwa ibisoloko indikhathaza okoko. Ndihlala ndizabalaza ngokwegrama nopelo.
Malunga nokhuphiswano: Ngaba uyazi utitshala owenza umahluko? Imida kunye noQokelela ingathanda ukuva ibali lakho ukuze sabelane ngalo nabanye kwaye sibhiyozele umsebenzi omangalisayo owenziwa ngootitshala yonke imihla. Imida iya kukhetha abokugqibela abane ukuba bafumane i-50 yeeKhadi zeZipho zeMida kwaye kwithamsanqa elinye lokufumana iKhadi leZipho ezingama-250.
Emini ndicinga ngezinto endizifundileyo, endizifundileyo nendizenzileyo. Kwikhaya lam lokuqhuba, ndihlala ndiqokelela ezo ngcinga entlokweni yam kwaye ndizilungiselela ukuba zibhale kwibhlog yam. Ngexesha lokuhlala kwam ukuba ndibhale, umxholo ukulungele ukuqhuma. Ndidla ngokubhala 'kwimifudlana yokuqonda'. Andikwazi ukuchwetheza ngokukhawuleza ngokwaneleyo… ke izivakalisi kunye nemihlathi yam zihlala zingahambelani kwaye zixhume.
Rhoqo, ndizishiya iimpazamo ezimbalwa. Ndigcina iposti njengoyilo. Ndifunde uyilo. Ndifunde ubungqina obuyilwayo. Ndizilungisa iimpazamo kwaye ndishicilele uyilo ngaphezulu nangaphezulu. Okokugqibela, ndiyipapasha iposti… kwaye ndiyingqinisise kwakhona. Nangona ndikhathalela kakhulu, ndiza kushiya enye yezo mpazamo 'zindenza ndibonakale ndisisidenge'.
Kodwa ayizukundinqanda ekubhaleni. Andivumi ukuyivumela.
Iprojekthi yokuQokelela yandikhuthaza ukuba ndibhale malunga notitshala wam wesiNgesi webanga lesi-8, uNksk Rae-Kelly. Ukuba awuthathi mzuzu okanye mibini ukufunda iposi, ndiza kukugcwalisa. Ngelo xesha ebomini bam ndandingaqinisekanga kwaphela kwaye ndifuna umntu oza kundinika isizathu sokufumana imbeko kum .
Endaweni yokugxila ekubhaleni kwam okubi, upelo, kunye negrama, UNksk. Rae-Kelly wawugqogqa umsebenzi wam ukuze afumane okulungileyo kunokuba kubi. Ngokugxila kokuqinisekileyo, bendifuna ukufunda ndize ndivelise umsebenzi omkhulu kuNksk Rae-Kelly. Ndiza kuwujonga kwakhona umsebenzi wam ngeempazamo ezenziweyo kwixesha elidlulileyo kwaye ndenze konke okusemandleni ukuze ndingaphindi ndizenze.
UNksk Rae-Kelly wayeyazi indlela yokukhuthaza nokuzakha ukuzithemba kwabafundi bakhe. Inqabile loo nto kootitshala nakwiinkokheli kule mihla. Ndiyazi ukuba uBrian akazange abhale iposti ukuze 'andenze ndibonakale ndisisidenge' kodwa ngokuqinisekileyo iyandikhathaza. Ithemba lam kuni bantu abacinga ngokubhloga okanye ukubhloga kukuba amanqaku anje akanciphisi.
PHAWULA: Ibhlog kaBrian yenye yezona zinto zibalaseleyo kumnatha. Sisixhobo esihle kwaye sindincedile ekuphuculeni ukubhala kwam kunye nokukopa izakhono zokubhala kakhulu. Yibhlog eyonwabileyo nethembekileyo kwaye ayinakuze isetyenziselwe ukudimaza ababhali… okwahlukileyo kuyinyani!
Andikwazi ukuthetha ngazo zonke iibhlog, kodwa ndiya kukuxolela ngeempazamo zakho kwaye ndiyathemba ukuba uyakundixolela ezam. Andifundanga ibhlog yakho kuba ndizama ukufumana iimpazamo zakho- ndiyayifunda kuba ndifunda kuwe okanye ndikonwabele ukubhala kwakho. Kwangelo xesha, ndiyathemba ukuba uzakuthatha ixesha ukugcwalisa ifom yoqhakamshelwano ukuba "ndikhangeleka ndisisithulu". Andisokuze ndicaphuke… omnye wabafundi bam kwafuneka andicacisele kathathu nge-imeyile xa ndibhala ndicebisa endaweni yengcebiso (argh!).
Ndiyakholelwa ukuba igrama yam kunye nezakhono zopelo ziyaphucuka. Ndiyayiqonda loo nto, kwabanye abafundi, iimpazamo ezifana nezo zikwenzakalisa ukuthembeka kunye nodumo lwam ngenxa yoko ndisebenza nzima ukuziphucula. Ndiyathemba ukuba undinqumle kancinci kwaye ugxile kumyalezo hayi iimpazamo!
Ootitshala abalungileyo bayabalungisa abafundi babo, abafundi abakhulu bayabakhuthaza. Ungatshintsha inkokeli, umqeqeshi, umfundisi, umzali okanye iblogi endaweni ka utitshala kwaye iyinyani.
Ngaba oku kukuphela kukaHillary Clinton?
Mar 20, 2007 ngo 7:27 PM
Ndingayibhala ithi "luthando olunzima" uDoug, kodwa eneneni, ukusetyenziswa "kwesidenge" kwintloko yayikukunyusa kuphela amandla okutsala. Kuvela ukuba yayiyeyona post idumileyo endakha ndayibhala, eyayothusa kakhulu.
Ndiyathemba ukuba akukho zimvakalelo zinzima. 🙂
Mar 20, 2007 ngo 8:01 PM
Andikwazi ukukuxelela ukuba mangaphi amaxesha ubhale kwakhona le post ukuze ingavakali ngaloo ndlela! Ibhlog yakho ibingumthombo wolwazi kunye nenkuthazo. Ndiyazi ukuba ubungathethi ngale ndlela kwaphela-ndinolwazelelelo okoko 'ndicelwe umngeni ngegrama'. 🙂
Endaweni yokudimazeka, ibhlog yakho ibilukhuthazo olukhulu kum (kwaye ndiqinisekile nabanye abaninzi). Igama 'isimumu' lihleli nje nam ukusukela oko ndalifunda kwaye andibonakali ngathi ndiyaliyeka.
Kananjalo, ndiye ndaphawula uninzi lwamagqabantshintshi (ndibhalisile) kwaye uninzi lwabaphawulayo alunantsingiselo! Iposi lakho liza kunceda abantu abaninzi (indincedile). Ndiyathemba ukuba abagqabazi abatyhafisi mntu ekubhaleni. Kuthatha ukuziqhelanisa kunye nomonde nesiqu sakho!
Enkosi kakhulu ngokujonga isithuba! Enkosi ngalo lonke ukhuthazo.
Mar 21, 2007 ngo-12: 27 AM
Ndicinga ukuba ibiyindlela elungileyo yokukhumbuza abantu ngeempazamo zabo. Ngokuqinisekileyo kuvakala ngokungqwabalala ukuthetha isimumu kodwa mhlawumbi yindlela abantu abafumana ngayo ingqalelo. Ngokuqinisekileyo yayiyindlela yakhe yokufundisa.
Mar 21, 2007 ngo-6: 57 AM
Ndiyavuma, Howie. Indincedile kwaye yayiyiposti eyoyikisayo. Ngelishwa, ndiyathemba ukuba 'ayidimazi' abantu ekubhaleni izithuba ezinje. Inqaku lam yayingekokuthatha uBrian (ndiyayithanda ibhlog yakhe). Injongo yam yayikukuqinisekisa ukuba sijonge ukukhuthazana.
Ngokuqinisekileyo andifuni ukuba abantu baphephe ukubhloga ukuba abakwazi ukubhala kakuhle. Into emnandi ngokubhloga kukuba abantu babhala ngento abayaziyo. Ngamanye amaxesha igrama nopelo azikho kolo didi… kodwa izinto ezifana nophuhliso, ukuba ngumzali, ukholo, njalo njalo, kwaye kufuneka kwabelwane ngazo!
Enkosi ngezimvo zakho!
Mar 21, 2007 ngo-10: 17 AM
Uchaza kanye le ndiyivayo xa ndinesihloko sokuyongeza kwibhlog yam ndiziva ndilahlekile engqondweni yam. Kwaye ndicinga ukuba umfundi webhlog akakhathali kangako malunga negrama kunye nopelo, okubalulekileyo ngumxholo wayo.
Into elungileyo ngokubhloga kukonyusa izakhono zakho zokubhala, njengeposti ngeposi ungafumana amava kwaye uchonge iimpazamo zakho, ngakumbi abantu abavela kwilizwe abangenaso isiNgesi njengolwimi lwe-1, umz.
Mar 21, 2007 ngo 1:09 PM
Umzekelo wakho ngowona mzekelo ubalaseleyo- khange ndicinge nangabantu abantetho isisiNgesi njengoLwimi lwesiBini! I-Intanethi ayinayo imida yolwimi kwaye kufuneka sixhase ngokupheleleyo kwaye siyixabise iibhlog zethu ezisasebenza ukuqonda isiNgesi kwaphela.
Enkosi ngokuphawula! Kwaye umsebenzi omkhulu kwibhlog yakho.
Mar 22, 2007 ngo-12: 08 AM
Ndiyavuma ukuba umxholo ubaluleke ngakumbi kodwa asinakuyibaleka inyani yokuba abanye abafundi bexhalabile malunga noko kubhalwe ngababhali. Okanye mhlawumbi, bacinga ukuba ukukwazi ukubhala inqaku ngokwendalo kuthetha ukuba ungumbhali olungileyo. Kwaye oko, upelo oluchanekileyo kunye negrama.
Jan 7, 2009 kwi-5: 44 AM
Xa imalunga nezithuba zebhlog kunye namanqaku, igrama
iimpazamo * ziyakwenza ubonakale usisidenge kuba intsingiselo yakho
Uyaphazamiseka! (njengengcebiso yakho ye-VS ityala)
Kodwa ndihlala ndijonga umxholo ... eyiyo
Kunzima kuba ndizicingela njengomfundi ofunda iimpazamo
nangona ndingaqinisekiswanga 🙂
Lihlabathi elahlukileyo xa kufikwa kwizinto zabantu
hlawula nangona! Ukuba umxholo wasimahla, meh, igrama kunye
Iimpazamo zopelo zikho kuyo yonke indawo.
Musa ukuzibetha kakubi =) Akukho mntu ugqibeleleyo (kwaye hayi
enye iya kuba :))